Apple Bhadhara - iPhone Nhau | Nhau dzePhone (Peji 2)
Tim Cook anosimbisa kuti Apple Pay ingadai yakapfuura muyero wekutengesa wePayPal
Tim Cook anoyambira kuti Apple Pay yaizove nenhamba yakakura yevashandisi nekutengeserana kupfuura PayPal, mukwikwidzi wayo mukuru mukutengeserana kwezvehupfumi.
Apple Pay inosvika muPortugal, Greece neRomania nekushamisika
Iye zvino Apple Pay inoburuka muPortugal neSlovakia inowedzerwa munyika yechiPutukezi mukati meEurope, kune nyika dzakawanda uye dzakawanda kwadzinowanikwa.
Apple Pay iri kuuya munguva pfupi kumisika mitsva gumi nematanhatu
Zvinoita sekunge kuwedzera kwaApple kwe2019 hakuzove kwakaderedzwa sekuzivisa kwaTim Cook munaKurume 25.
Hurumende yeUnited Kingdom yatanga kubvumidza mashandisiro eApple Pay kubhadhara mamwe emasevhisi epamhepo ayo yainoita kuti zviwanikwe kuvagari.
Saka iwe unogona kumisikidza iyo chaiyo Apple Kadhi pane yako iPhone
Iyo yakasvinwa kuti mashandiro ekumisikidza eiyo nyowani Apple Kadhi ichave ine yedu kifaa. Tinokuratidza matanho ese atichafanira kuita.
Iwe unogona ikozvino kushandisa yako Banco Mediolanum kadhi muApple Pay
Apple Pay yave kuwanikwa nemakadhi kubva kumabhangi anopfuura makumi maviri kuSpain uye imwezve ichangobatidzwa ...
Apple Pay haina kukunda kunetseka Europe
Apple Bhadhara, Apple's mobile mubhadharo system, iri yakawedzerwa nyore mu iPhone yedu kwayakange iine ...
Apple Pay inowanikwa muGermany
Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti kuvhurwa kweApple Pay kuGerman kwave pedyo uye kuti zvinogona kuitika mumaawa mashoma anotevera.
Apple Pay yave kuwanikwa mumabhanga makuru muSpain uye kushandiswa kwayo kuri kutanga kukura. Kana uine bhizinesi, unofanirwa kudzidza kuti rinoshanda sei.
Germany ichava nyika inotevera kunakirwa neApple Pay
Munguva yemusangano wemhedzisiro iyo Cupertino-based kambani yakaitwa nezuro, Apple yakapa, senguva dzose, ...
eBay inotsigira Apple Pay gare gare gore rino
Zvishoma nezvishoma, Apple Pay iri kuve imwe yemapuratifomu anonyanya kushandiswa senzira yekubhadhara muhupenyu hwezuva nezuva hwevashandisi vazhinji, nekuda kweiyo peji eBay auction, ichangobva kuzivisa kuti ichapa rutsigiro rweApple Pay pa kupera kwegore rino, kunyangwe panguva ino chete muUnited States.
BBVA neBancaMarch ikozvino yave kuwanikwa paApple Pay
Apple neBBVA vachangobva kumisikidza iyo Apple Pay sevhisi yemakadhi avo. BBVA yaive rakakura bhanga reSpanish iro rakanga richiri kujoina.
Bankia naSabadell vatove vanowirirana neApple Pay!
Kwemaawa mashoma, vese vashandisi vane kiredhiti uye makadhi ekubhengi kubva kuBanc Sabadell neBankia, vatove ...
Apple inowedzera makumi matatu emabhangi matsva anoenderana neApple Pay muUnited States
Huwandu hwemabhangi nemakambani echikwereti anoenderana neApple Pay muUnited States akawedzera zvakare muhuwandu. Pane ino nguva, makumi matatu matsva akawedzerwa.
Apple inogona kunge iine yayo kiredhiti kadhi ye2019
Apple inogona kunge ichitaurirana neGoldman Sachs kuti itange yayo kiredhiti kadhi kuti ishandise neApple Pay pane ayo nhare mbozha.
Dzimwe nyika nhatu dzichabatana neApple Pay gore rino: Norway, Poland neUkraine
Kuwedzera kweApple Pay kuri kuenderera uye kuri munyika medu mazuva mashoma apfuura iyo ...
BBVA neBancaMarch inowanikwa munguva pfupi paApple Pay
Mushure mekusahadzika kwakawanda pamusoro pekuti ichasvika here, BBVA inozopedzisira yave kuwanikwa paApple Pay. BancaMarch yakawedzerwawo se "inowanikwa munguva pfupi".
McDonalds uye Apple Pay timu kumusoro kuti vape mahara matapiri kune vatengi vavo
Kukwidziridzwa kwaApple neketani yekutsanya yekudya McDonalds haina kujairika, kunyangwe chiri chokwadi kuti ...
Apple Pay inoenderera mberi nekuwedzera kwayo kwepasirese muEurope, China neNorth America
Vakomana vanobva kuCupertino vanoenderera mberi nekuwedzera yavo Apple Pay sevhisi, asi kwete kune dzimwe nyika, asi ivo vari kutarisa kuwedzera nhamba yemabhangi munyika dzairi kuwanikwa.
Caja Rural uye EVObanco vatengi vanogona ikozvino kushandisa Apple Kubhadhara
Uye ndezvekuti kubva nhasi vatengi veCaja Rural uye EVObanco vatove nepo sarudzo yekuwedzera ...
Banco Santander anoenderera mberi nekubheja paApple Pay uye anovandudza mashandisiro ayo
Pakupedzisira pane mukana wakanangana nekushanda uye mawijeti kune iyo Banco Santander application, ngatitarise izvo zvitsva.
Apple inokurudzira Apple Kubhadhara ne4 matsva iPhone X mavhidhiyo
Apple inoda kusimudzira kushandiswa kweApple Pay uye ndeipi nzira iri nani yekuzviita kupfuura kuburikidza ne iPhone X uye Face ID. Kune izvi akaburitsa mavhidhiyo mana pane yake YouTube chiteshi
Brazil yatove neApple Pay inowanikwa
Nhau maererano nenzira yekubhadhara yaApple, Apple Pay, haimire kusvika uye mune ino nyaya tiri kutaura ...
Bankia naSabadell, vatove kuzviratidza kuti vanoenderana neApple Pay
Pasina kupokana, inhau dzakanaka kwazvo dzevatengi veApple uye idzo dzemabhanga makuru maviri, Bankia uye ...
Apple Pay Cash inogona kusvika kuSpain kubva kune imwe nguva kuenda pane imwe
Zviratidzo zvakati wandei zvinowanikwa pasocial network zvinonyevera nezvekuuya kweApple Pay Cash kuSpain, Ireland neBrazil.
Apple Pay inoenderera ichiwedzera: vanopfuura mamirioni zana nemakumi manomwe nemanomwe vashandisi vanoshanda uye anopfuura mabhiriyoni 127
Chinhu pamusoro peApple Pay ndechechokwadi kuti kune vakawanda chakange chisiri nekukurumidza sezvaitarisirwa mu ...
Vakomana paGoogle vanosarudza kubatanidza Android Pay neGoogle Wallet kuvhura Google Pay, iyo nyowani app yekubhadhara paApple nechinangwa chekubvisa pachigaro Apple Pay.
EVO Banco uye Caja Rural inoenderana neApple Pay munguva pfupi
Mapepa maviri matsva eSpanish achakurumidza kuenderana neApple Pay sevhisi. Iwo ari EVO Banco neCaja Rural.
Apple Pay yave kuwanikwa mu50% yevatengesi veUS
Anoda kusvika makore mana kutangwa kweApple Pay, iyi tekinoroji yekubhadhara isina waya yave kuwanikwa mu50% yevatengesi vari muUnited States.
Apple Pay ichasvika muPoland kutanga kwegore rinouya
Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti Apolonia ichave iri nyika inotevera kugamuchira Apple Pay nemaoko maviri, kunyangwe mwedzi mishoma yakanonoka.
Apple Pay inoenderera ichikura muUnited States, France neIreland
Apple's isina kutaurirana yekubhadhara system inoita kunge isina magumo. Zvishoma nezvishoma iri kuve inozivikanwa, kunyangwe ...
Kubva pakaunzwa Apple Pay, Apple's isina waya yekubhadhara tekinoroji iri kuwedzera pasi rese….
Mabhangi matsva ari kutsigira Apple Pay
Kwevhiki rechipiri rakateedzana, Apple yakawedzera huwandu hwemabhangi akatsigirwa uye masangano echikwereti, asi panguva ino kuRussia, Canada neJapan.
Apple Pay inoramba ichiwedzera huwandu hwemabhangi akatsigirwa kunze kweSpain
Huwandu hwemabhangi nemasangano echikwereti ayo atove anowirirana neApple Pay muUnited States, anga akanyanya mwedzi uno wapera.
Huwandu hwemabhangi anoenderana neApple Pay unoramba uchiwedzera kunze kweSpain
Apple yakangovandudza huwandu hwemabhangi akatsigirwa muUnited States neChina neApple Pay, iine makumi maviri nemapfumbamwe ekuwedzera muzere
Banco Santander inogonesa Apple Bhadharira makadhi eVISA
Iwo makadhi eVISA eBanco Santander anouya kuApple Pay kujoina iyo Mastercard uye kuti tinogona kuishandisa mukubhadhara kwedu nhare.
New York Guta Kutanga Kutsigira Wireless Kubhadhara muRuzhinji Kutakura
New York Guta Kutanga Kutora NFC Vaverengi pane Yese Subway uye Bhazi Transit Services
Kuwedzera kweApple Kubhadhara Kuenderera Mberi: Sweden, Finland, Denmark, uye United Arab Emirates
Tiri panguva yakakosha yeApple Pay uye nhau dzichangoburwa dzinotaura nezvekumhara kukuru mu ...
Makore matatu mushure mekutanga kweApple Pay, inguva yekutora stock
Takakwanisa kushandisa Apple Pay pane maPhones edu kwemakore matatu, sevhisi mukukura kwakazara uye iyo Apple inoda kutora stock.
Apple Bhadhara Spain ikozvino yawanikwa kuCaixaBank uye Imaginbank
MuSpain tanga tichinyunyuta nezve "yakasarudzika" iyo Banco Santander yakachengeta neApple Pay kwerinenge gore….
Apple Pay inowanikwa pa5.000 + Wells Fargo ATM
Wells Fargo achangobva kuzivisa kuti huwandu hweATM hwakagoverwa muUnited States uye inowirirana neApple Pay inosvika zviuru zvishanu
Kutumira mari neApple Pay kunosvika pane edu zvishandiso muna Gumiguru
Apple Pay ichave ichiwanikwa kubva muna Gumiguru kumidziyo yedu neIOS 11 uye neWatchOS 4 inoenderana zvizere neMeseji neSiri.
Apple inotiratidza muvhidhiyo mashandisiro eApple Pay Cash
Chimwe chinhu icho kambani yeCupertino yanga ichiita kwenguva yakati iri kuvhura mavhidhiyo maanotiratidza ...
Apple inoenderera nekuwedzera huwandu hwemabhangi anotsigira Apple Pay
Vakomana vanobva kuCupertino vakagadzirisa huwandu hwemabhangi uye masisitimu echikwereti anoenderana neApple Pay muUnited States
Apple inoremedza kubhadhara kuburikidza neApple Pay pamapeji anosimudzira hukuru hwevachena uye rusaruraganda
Apple yatanga kumira kupa Apple Pay kubhadhara tekinoroji pamawebhusaiti ayo anokurudzira hukuru hwevachena uye ruvengo rwemarudzi
Germany ndiyo yaizotevera kujoina Apple Pay
Tiri kuona yakanaka shoma yeguhwa uye kudonhedza nekuda kweiyo firmware yeImbaPod iyo ingave iri inotevera ...
Finland neSweden dzichava nyika dzinotevera kugamuchira Apple Pay gore risati rapera
Nyika dzinotevera uko Apple Pay ichave ichiwanikwa neFinland neSweden, sezvakataurwa naTim Cook kumusangano uchangoburwa weApple muhoro
Apple Kubhadhara Kuwedzera Kwenyika Dzese Kunoenderera Kuwedzera Nyowani Inotsigirwa Mabhangi
Apple yakagadzirisa runyorwa rwemabhangi uye echikwereti masangano anoenderana neApple achiwedzera makumi maviri emamwe.
Apple Pay inoramba ichienderera mberi muUnited States, Russia, China, Ireland neItaly
Kuwedzeredzwa kwepasi rose kweApple Pay kuri kukurumidza uye kushanda zvakanyanya, zvinoenderana nezviziviso zviri kuitwa nemabhangi matsva munyika dzairi kuwanikwa
CaixaBank inozivisa zviri pamutemo kuwanikwa kweApple Pay gore risati rapera
Iyi ndeimwe yemashoko akanaka atakawana uyu Chipiri, Chikunguru 18, 2017, imwe ...
50% discounts paApple Bhadharira vashandisi muChina
Isu tese tiri pachena kuti Apple iri kunyatsofarira China nekuda kwehuwandu hwebatsiro iyo yainowana kubva mukuona iyo ...
Boon yatove inowirirana muSpain kushandisa neApple Pay
Uye ndezvekuti maawa mashoma apfuura isu takaburitsa nhau nezve chirevo chepamutemo kubva kubhangi reGerman N26 nekuenderana kwaro ...
N26 inozivisa kuiswa kweApple Pay muSpain pakupera kwegore
Zvakanaka, isu tatova nedzimwe nhau dzakanaka dzeChina ichi, Chikunguru 6, uye ndezvekuti rimwe bhangi rine ...
Apple inoda kuti tisiye chikwama kumba neRasa Wako Wallet chiitiko muSan Francisco
Vakomana vanobva kuCupertino vacharonga vhiki rinotevera kubva muna Chikumi 23 kusvika 25 iyo Rasa chiitiko chako cheWallet icho chatinowana maoraiti pakutenga.
30 matsva emabhangi eAmerica uye masangano echikwereti izvozvi zvinoenderana neApple Pay
Vakomana vanobva kuCupertino vakagadzirisa runyorwa rwemabhangi uye echikwereti masangano anoenderana neApple Pay muUnited States.
iOS 11 irikuunzwa neApple parizvino uye chimwe chezvinhu zvakakosha zviri mubhadharo pakati pevashandisi nekutenda kuMessage uye Apple Pay.
UK yatove inotsigira 'hapana muganho' Apple Bhadhara kubhadhara munzvimbo zhinji
Kubhadhara kuburikidza neApple Pay kunoenderera nekuwedzera vashandisi kutenderera pasirese, asi muUnited States, Canada neUnited Kingdom ...
Maitiro ekubhadhara nefoni yako uchishandisa Teregiramu
Teregiramu yakawedzera nhare yekubhadhara inobvumidza iwe kuti ushandise chero kiredhiti kadhi kana Apple Pay kutenga zvigadzirwa
Tevera kuwedzera kweApple Pay muUnited States
Vakomana vanobva kuCupertino vakawedzera huwandu hwemabhangi eAmerica anotsigira Apple Pay.
Apple Pay yave kuwanikwa muItari
Iyo mobile kubhadhara sevhisi Apple Pay yatove kushanda muItari nemabhangi matatu emakadhi eVisa neMasterCard
Apple Pay inogadzirira kumhara zviri pamutemo muItari mangwana
Zvinotaridza kuti yaive nezuro apo Apple yakatanga basa rekubhadhara kuburikidza neApple Pay kuSpain. Nhasi uno akasarudzika midhiya ...
Aya ndiwo makumi maviri matsva echikwereti anouya kuApple Pay
Welcome to the world of Apple Pay, iyo isingabatanidzi yekubhadhara system kuburikidza nharembozha iyo Apple yaisa ...
Apple inogona kuvhura yayo kiredhiti kadhi
Apple inogona kuvhura yavo peer-to-peer yekubhadhara chikuva gore rino uye rakapotsa debit kadhi yekushandisa neApple Pay
Banco Santander ikozvino inowirirana neApple Pay muUS
Zvinoita sezvisingadaviriki kuti bhanga reSantander, rinova ndiro rakaunza Apple Pay kuSpain kana kuUnited Kingdom kutanga, harina ...
Apple inowedzera mamwe masangano makumi maviri kuApple Pay, uye inoramba ichikanganwa Spain
Ino nguva nhau maererano nemabhangi anotendera kubhadhara kuburikidza neApple Pay zvakare inosvika kuChina.
Western Union a inogamuchira Apple Pay kutumira mari
Iyo Western Union mari yekuchinjisa sevhisi yakagadzirisa mashandisiro ayo ichikubvumidza iwe kutumira mari kuburikidza neApple Pay.
Apple Pay yave kuwanikwa muTaiwan
Nyika yekupedzisira uko Apple Pay ichangosvika iTaiwan, ichipa rutsigiro rwemabhangi manomwe, pakati payo patinowana makuru mana.
30 matsva emabhangi muUS, China neAustralia izvozvi vanotsigira Apple Pay
Ivo vakomana veCupertino vakawedzera huwandu hwemabhangi anotsigira tekinoroji yekubhadhara yemagetsi yeApple.
Ireland inotangisa Apple Pay nhasi nemabhangi maviri, Ulster Bank uye KBC Bank Ireland
Sekutaura kwemusoro wenyaya ino, Ireland nhasi inotangisa sevhisi yekubhadhara nemaApple zvishandiso, Apple ...
Iwo masevhisi ayo Apple anopa uye haatombo kushandisa muSpain
Mubvunzo unomuka, mangani masevhisi, software uye mashandisirwo akaunzwa neApple uye kuSpain isu hatifarire? Ngatitarisei kumusoro wenyaya.
Apple inotakura inotakura inoramba ichiwedzera
Muzere uye yakazara blockade yeApple Pay muSpain, tinoona kuti iyi yekubhadhara system kuburikidza neanoshanda
Isu tinotarisa kumashure uye tiongorore, nei mwedzi yakati gare gare mabhanga matsva achiri asiri kujoina chirongwa?
Mabhangi eAustralia anoda kuvhurwa kweNFC kujoina Apple Pay
Mabhangi makuru eAustralia anochinja zano ravo kurwisa Apple Pay uye anotarisa pakuzarura kweNFC chip ye iPhone neApple Watch
Apple Pay ndiyo yatove inonyanyo shandiswa nharembozha yekubhadhara muUS; Inobata PayPal
Apple's mobile mubhadharo system inoenderera zvakatsiga: Apple Kubata inosvika PayPal uye ndiyo yatove inofarirwa nhare yekubhadhara system muUS.
Chirevo cheTNN chinoratidza kuti Apple Kubhadhara kushandiswa kwakakura kupfuura 50% mumwedzi gumi nemaviri inopera Zvita 12.
Podcast 8 × 18: Iyo iPhone 8 inotanga kukonzera kunzwa
Runyerekupe nezve iyo nyowani iPhone kana tichiri nemwedzi mipfumbamwe kubva pakuunzwa uye chiitiko chebofu neApple Pay
Apple Bhadhara munguva pfupi iri kuwanikwa kune ING Direct vatengi muAustralia
Musi waZvita 1 uye mushure mekumirira kwenguva refu, vashandisi veBanco Santander kuSpain vakaona ...
Carrefour Pass, sarudzo yakanakisa kana iwe uchida kushandisa Apple Kubhadhara usina kumirira bhangi rako kuti riwirirane
Apple Pay yatovepo kuSpain uye yekutanga isiri yemari kambani inosanganisira rutsigiro ndiyo Carrefour cheni yezvitoro.
Chinyowani iPhone 7 chiziviso muJapan chinosimbisa kumhanya kweApple Pay kushandiswa
Apple ichangobva kuvhura chiziviso chitsva muJapan chinokurudzira kushandiswa kweApple Pay seyakajairwa nzira yekubhadhara munyika
Samsung inoendesa iyo Samsung Kubhadhara mini app kuApp Store ... uye Apple inoiramba
Mune izvo vazhinji vanofunga nezvekushambadzira kufamba, Samsung yakaendesa iyo Samsung Kubhadhara mini app kuApp Store. Fungidzira zvakaitwa naApple?
Zvakare shandisa yako Carrefour PASS Kadhi muApple Pay
Carrefour nekadhi rako rePASS richabatanawo neApple Pay kuti itibvumidze kushandisa sevhisi yeApple nekadhi rako rechikwereti rakakurumbira.
8 × 13 Podcast: Uye isu tichiri vasina iyo AirPods
Maawa makumi maviri nemana nhau dzisati dzaziviswa kuti Apple Pay yaizosvika kuSpain muna Zvita 24 mune yedu podcast takataura nezvazvo
Asina pundutso muUnited States ikozvino anogona kugamuchira mipiro kuburikidza neApple Pay
Apple yakangozivisa kuti yayo yemagetsi kubhadhara chikuva ikozvino inotsigira mawebhusaiti emasangano asingabatsiri.
Apple Pay inoenderera mberi nekukura kwayo uye inova yechishanu online yekubhadhara sevhisi
Apple Pay inoenderera mberi nekukura kwayo kwakanaka uye inodarika Google Wallet mune chinzvimbo chepamhepo chekubhadhara masevhisi, ichive cheshanu chinonyanya kushandiswa sevhisi.
Apple services yakakura 24% panguva yeQ4
Kusiyana nekudonha mukutengesa, Apple masevhisi angadai akakura 24% panguva yeQ4 yegore ra2016 nemasevhisi akaita seApple Music neApple Pay.
Apple Pay yave kuwanikwa muJapan
Japan ndiyo nyika yazvino kusvetukira paApple Pay yemagetsi yekubhadhara tekinoroji bandwagon, ichitevera kekutanga kugadziridza kune iOS 10
Russia ndiyo nyika yegumi kunakidzwa neApple Pay
Apple Pay yave kuwanikwa muRussia, ichiita nyika yechigumi kutsigira tekinoroji yekubhadhara yemagetsi.
Taiwan inogadzirira kusvika kweApple Pay
Ipo zvichiratidzika kuti Spain yadonha kubva pane runyorwa rwenyika uko mune fungidziro iyi fomu nyowani yekubhadhara zvemagetsi ...
Apple Pay inoramba ichiwedzera muUnited States. Mumaawa ekupedzisira yasvika mamwe mabhangi makumi matatu nenomwe nemasangano emari munyika.
Apple haizovhure iyo NFC chip kune yechitatu mapato mushure mekukumbira kwemabhangi eAustralia
Apple ichangotumira mhinduro kuchikumbiro chemabhangi eAustralia ayo anoda kuvhura kushandiswa kweiyo NFC chip kune vechitatu mapato
Apple Pay yave kuwanikwa muHong Kong
Maawa makumi maviri nemana mushure mekuziviswa kwekuuya kweApple Pay muFrance, Apple yakazivisawo kusvika kuHong Kong.
Apple inoda kukurudzira kushandiswa kweApple Pay, kutanga neApple Stores uye iri kupa $ 5 kadhi rechipo muUS uye UK
Nyika yekupedzisira uko Apple Pay ichangosvika iFrance, masvondo matatu vasvika muSwitzerland.
Apple Pay yave kuwanikwa muSwitzerland
Nyika yekupedzisira iyo yakagamuchira Apple Pay nemaoko akavhurika iSwitzerland, uko parizvino mabhanga makuru matatu atopa rubatsiro.
Apple Bhadhara mapeji ewebhu anogona kuuya mushure meWWDC
Parizvino, tinogona kubhadhara neApple Pay mune zvimwe zvitoro, asi runyerekupe runoti isu tichakwanisa kuishandisa pamapeji ewebhu.
Isu tichiri kuchimirira kuSpain, asi muUnited States inoramba ichiwedzera kuvapo kwayo. Apple Pay inosvika makumi matatu emamwe masangano emari muUS.
Apple Pay ichasvika muSwitzerland munaJune 13
Musi waJune 13, zuva rinotangira WWDC, Apple Pay ichasvikawo munyika nyowani: Switzerland
Pfupiso yevhiki nevhiki kwatinokuratidza nhau dzakanangana nezve iPhone kunyanya uye nyika yeApple mune zvese
Samsung yekufambisa yekubhadhara sevhisi yatove munyika medu, asi maitiro ekusvika kwayo anosiya vashandisi vazhinji vari kunze.
Apple Pay ine kutorwa zvishoma kunze kweUnited States
Kuwedzera kweApple Pay kwepasi rose kunononoka kupfuura zvaitarisirwa. Uye zvakare, akasiyana matambudziko ehunyanzvi ari kukanganisa kugamuchirwa kwayo.
Apple inoshanda kuwedzera Apple Pay mune dzimwe nyika
Apple Pay yaive yeimwe yezvinhu zvakakosha zvikuru zvakaunzwa neiyo Cupertino-based firm yakazivisa angangoita maviri apfuura ...
CurrentC, sevhisi yekubhadhara nhare inokwikwidza neApple Pay, yanonoka kuvhurwa kwayo zvakare. Ichasvika riini (kana zvachose)?
Kushandiswa kweApple Pay kunowanda ne5 mugore rimwe chete
Apple yakaratidza isina kunaka makota matatu, kunyangwe isina kunyanyisa. Uye zvakare, ivo vakati kushandiswa kweApple Pay kwakawedzera ne5 mugore rimwe chete.
50 mabhanga matsva muUnited States ikozvino anotsigira Apple Pay
Apple ichangobva kugadzirisa runyorwa rwemabhangi uye masangano echikwereti anoenderana neApple Pay, zuva mushure mekumhara muSingapore
Apple Pay inowedzera makumi matatu nemaviri mabhangi muUnited States
Mangwanani ano takamuka kumashoko ekuti bhanga reBritain Barclays rakazopa rutsigiro ...
Apple Pay icharova mawebhusaiti enhare mukupera kwa2016
Zvinoenderana neruzivo rwakaburitswa svondo rino neRe / kodhi, iyo kambani iyo Tim Cook inomhanya haidi kusiya Apple Pay se ...
Apple Pay inowedzera mabhanga matsva muChina neUnited States
Tichakamirira kuwedzera chaiko kweApple Pay mune dzimwe nyika, zvese United States neChina vanoramba vachiwedzera mabhanga anoenderana neApple Pay.
Apple tekinoroji inowedzera, neimwe nzira, kuburikidza neanopfuura zviuru zvitanhatu zveExonMobil gasi
Apple Pay inowedzera rutsigiro rwemamwe makadhi makumi maviri neshanu nemasangano emari
Apple Pay inoenderera nekuwedzera rutsigiro rwemabhangi nemakadhi. Pane ino chiitiko, vashoma vanowedzerwa kune iyo chinyorwa: 27 zvimwe.
Mamiriyoni matatu emakadhi akanyoreswa kuApple Pay mumazuva maviri ekutanga muChina
Vazhinji vashandisi ve iPhone izvo nhasi vachiri vasingakwanise kunakidzwa nenzira nyowani ye ...
Apple ichawana hafu nekutengesa kwega kwega kuChina kupfuura kuUnited States
China chapera, Apple Pay yakasvika kuChina, mumwe wemisika mikuru nhasi yevana iri mu ...
Kuuya kweApple Pay muChina kwakonzera dambudziko nyowani kune avo vari muCupertino nekuda kweye avalanche yevashandisi vari kuyedza kuwana sevhisi.
Apple Pay inosvika iyo inogona kunge iri musika wayo unonyanya kukosha: China
Yakaitwa kukumbira. Anenge makore maviri mushure mekuunzwa, Apple Pay yasvika pamusika unonyanya kukosha: China.
Kudonha kutsva kweApple sevhisi: nezuro kwaive kuchinjika kweApple Pay
Iko kutanga kuve kwakajairika uye isu hatifarire izvi, asi nezuro pakave nekuwa kutsva kweApple sevhisi. Panguva ino, Apple Bhadhara.
Anopfuura chiuru emabhangi uye masangano echikwereti anopa rutsigiro rweApple Pay
Mazuva mashoma apfuura, isu takakuzivisa iwe nezve huwandu hwemabhizinesi aripo izvozvi ari kupa rutsigiro rweApple Pay, iyo yasvika ...
Square's NFC chip muverengi yave kuwanikwa muApple Stores
Zvishoma nezvishoma, Apple Pay tekinoroji iri kuwedzera kusvika kunhamba huru yemabhizinesi muUnited States….
Apple Pay yave kuwanikwa mumamirioni maviri ezvitoro
Iyo Cupertino kambani inonyevera kuti zvave kutokwanisika kushandisa Apple Pay muzvitoro zvinopfuura mamirioni maviri, zvisinei, isu tichakamirira kuSpain.
Ichi ndicho chitsva Samsung shambadziro iyo inoreva Apple zvakare
Kambani yeKorea yakaburitsa shambadziro nyowani iyo inoreva, kuti ishanduke, kune rimwe rebasa reApple nenzira yekuseka.
Apple Pay yave kuda kuvhura kuChina neUnitedPay
Zvinotaridza kuti mirira kuti ukwanise kushandisa Apple Pay muChina yave kusvika kumagumo. Mavhidhiyo maviri akaonekwa izvo, zvinofungidzirwa, zvinoratidza izvozvo. Pindai muchaiona.
Apple ajoina UnionPay kusvika China
Apple yasvika chibvumirano neUnited Pay kuti ipe hurongwa hwayo hwekubhadhara munyika nekukurumidza.
Apple inowedzera makumi matanhatu nematanhatu emabhangi anoenderana neApple Pay
Apple yakangowedzera makumi matanhatu nematanhatu emabhangi uye masangano echikwereti anoenderana neApple Pay
Walmart Kubhadhara, imwe nzira nyowani yekubhadhara zvemagetsi
Walmart ichangotanga fomu yayo nyowani yemagetsi kubhadhara kuburikidza neWalmart Pay kunyorera
Apple Pay inowedzera makumi mana emabhangi uye zvikwereti zvikwereti
Apple Pay inoenderera ichikura munyika yayo yekumba uye parizvino inotsigirwa nemabhangi mazana masere nemasangano echikwereti.
Apple Pay yaive flop paChishanu Chishanu
Apple Kubhadhara mashandisiro akadonhedza Chishanu Chishanu chapfuura
Mheremhere muAustralia pamusoro peApple Pay uye kuramba kwemabhangi
Vezvematongerwo enyika veAustralia vanoda kuti kuferefetwe kuvhurwa kwemabhangi eAustralia kuApple Pay.
Apple ichangobva kuburitsa vhidhiyo nyowani pane yayo YouTube chiteshi uko inotiratidza nzira yekumisikidza mudziyo wedu kuti ushandise Apple Pay
Apple Bhadhara nyika kuSpain muna 2016
Tim Cook anozivisa kuuya kweApple Pay kuSpain muna 2016
Apple inoburitsa chiziviso chitsva nezve iyo iPhone 6 uye Apple Pay
Apple yakaburitsa chiziviso chitsva kubva kukambani "kana isiri iyo iPhone" mairi inotaura nezvekunaka kweApple Pay
Apple Pay inoenderera mberi nekuwedzera kwayo: inowedzera makumi matatu emabhangi eUS
Apple yakawedzera rutsigiro kwemamwe makumi matatu emabhengi emahofisi eApple Pay, ichisvika munzvimbo dzinopfuura mazana matatu muUS.
Apple Pay inowedzera kutsigira kwemamwe gumi nemaviri emabhangi uye makadhi echikwereti
Apple Pay yakawedzera rutsigiro rwemamwe mabhangi gumi nemaviri uye makadhi echikwereti, kunyangwe kusvika muEurope kwebasa rekubhadhara nhare hakuzivikanwe
Apple ichaunza chirongwa chekuvimbika, "Apple Bhadhara Mibairo"
Apple inoronga kuunza chirongwa chitsva chekuvimbika kana mibairo kuWWDC yakanangana nekusimudzira Apple Pay inonzi "Apple Pay Rewards."
Maitiro ekudzima makadhi echikwereti akachengetwa muApple Pay
Matanho ekubvisa kadhi rechikwereti rakabatana neApple Pay
Iyo yekupedzisira gwara rekuti ungashandisa sei Apple Pay
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve mashandisiro eApple Pay, kupi uye riini, nhasi tinokuunzira gwara rakajeka kuti uwane zvakazara mairi.
Vamwe vashandisi vane dambudziko rekuchengetedza makadhi muApple Pay
Vamwe vashandisi havakwanise kuwedzera yavo kiredhiti kadhi ku iPhone 6 mushure mekudzoreredza, ichitadzisa zvakajairika kushandiswa kweApple Pay.
Maitiro ekumisikidza default kubhadhara kadhi muApple Pay
Gadzira default kadhi rako rekushandisa muApple Pay, nenzira iyi unochengetedza nguva mukubhadhara muzvitoro nepamhepo.
Chinyorwa chemabhangi uye masisitendi anoenderana neApple Pay
Rondedzero yezvivakwa, mabhangi uye makadhi echikwereti uye echikwereti anoenderana neApple Pay yekubhadhara system
Kana uine kiredhiti kadhi reUS, unogona kushandisa Apple Kubhadhara mune chero nharaunda
Unyengeri muIOS 8.1 yekumisikidza Apple Kubhadhara kana tisingagare muUnited States kuwedzera makadhi echikwereti eAmerica anotibvumidza kubhadhara tichishandisa NFC.
Vhidhiyo kuratidzira maitiro ekubhadhara neApple Pay paMcDonalds
Vhidhiyo inoratidza maitiro ekubhadhara neiyo iPhone 6 paMcDonalds uchishandisa Apple Pay senzira yekubhadhara isina waya kuburikidza neNFC.
iOS 8.1 yave kuwanikwa padivi peApple Pay
Apple Inoburitsa iOS 8.1 Software Kugadziridza NaApple Pay Uye Zvimwe Zvitsva Zvitsva
iOS 8.1 maficha anosvika Muvhuro unotevera kune yedu iPhone nePad
Pfupiso yekuvandudza kwakaunzwa neyekuvandudza kuIOS 8.1 yatichaburitsa Muvhuro unotevera, Gumiguru 20.